Fanafihana faobe teny Avaradrano Jiolahy 7 nidoboka eny Tsiafahy
Eny Tsiafahy no niandry ny fitsarana azy ireo fito lahy izay andian’olon-dratsy nandroba tanàna telo samy hafa tao anatin’ny indray alina,
araka ny fampitam-baovan’ny zandary ao Ambohimanga Rova. Ny alin'ny alahady 28 hifoha 29 jolay teo tokony ho tamin'ny 11 ora dia nitrangana fandrobana nataon'andian-jiolahy miisa 13 mirongo fiadiana tao amin'ny fokontany Mahatsinjo, kaominina Ambohimanga Rova, Isahafa, kaominina Anosy Avaratra ary Ambohidahy, kaominina Ambohimanga Rova, samy distrikan'Antananarivo Avaradrano, faritra Analamanga. Fahitalavitra sy vola ary firavaka no tena nangalarin'izy ireo tamina tokantrano miisa telo. Tsy nampiasa basy mihitsy ireo jiolahy na dia nisy aza ny tora-bato nataon'ny fokonolona tamin'ny fokontany farany io fa namaly tora-bato ihany koa na dia voalaza fa nitondra basy poleta iray sy basy lava iray. Vokany, olona 7 no naratra ary iray tamin'ireo jiolahy kosa no hitan'ny fokonolona fa naratra. Vokatry ny fikarohana nataon'ny zandary tany an-toerana dia voasambotra ny iray tamin'izy ireo. Io indray no nanondro ireo namany. Vokany, 7 no voasambotra, 6 kosa mbola karohana. Natolotra ny fampanoavana izy ireo ny talata lasa teo.